MEAD GURIGA DHEXDIISA: CUNTO KARIYE CAADI AH - BEEKEEPING
Mead - cabbitaan lagu yaqaan dadka tan iyo wakhtiyadii Ruushkii hore. Waxaa la diyaariyay awoowayaasheenna, maantana ma aysan luminin sumcaddeedii. Hadda waxaad si fudud u iibsan kartaa cabitaan dukaanka, laakiin naga mid ah waxaa jira dad badan oo jecel guryaha dhadhanka dhabta ah.
Daqiiqada ah ee karinta macaan, xayawaanka kaas oo hoos ku qoran, ayaa kuu sheegi doona maqaalkan, sidoo kale waxaad baran doontaa waxyaabo badan oo faa'iido leh.
La kulan cabitaanka
Mead waa cabitaan khamri ah oo malab iyo biyo ah, oo laga helo malax malab. Awoodda malabku waa caadi ahaan 5-10%.
Halabuurka, marka lagu daro qaybaha ugu muhiimsan, waxaa ka mid ah dhoobada, khamiir, waxyaallo dhadhan oo kala duwan. Maalmihii hore, berry iyo khudradda sida duurjoogta ah, cherry, karraaniga, kiriimka, koofiyadaha, iyo sinjiga ayaa lagu daray cabitaanka.
Cuntadani wax lagu kariyo tiknoolajiyadda casriga ah way fududahay. Geeddi socodka oo dhan wuxuu qaadanayaa ilaa lix maalmood, dhadhanka cabitaankan weyn wuxuu si aan fiicnayn u noqon qaabkeeda hore.
Qodobka la isku qurxiyo ee wax lagu cuno (aan lahayn vodka) guriga
Medovukha waa cabitaan caan ah, waxaa jira kala duwanaansho badan oo ka mid ah, laakiin waxaan ku siin doonaa cunto kariye caadi ah oo lagu kariyo guriga.
Ma taqaanaa? Muuqaalka casriga ah ee muuqaalkuna waxa uu ka dhex muuqday qarnigii labaatanaad. Waqtiyada Soofiyeetiga ah, "malab aan weli qaangaarin" ayaa inta badan la bakhtiiyey, oo aan la kaydin karin wakhti dheer oo aan ku habboonayn iibka. Qaar ka mid ah beekeepers soo dhigay habka noocaas ah ee ay qashinka - qasi jiray iyo gogol la khamiir. Waxay ka soo baxday cabitaanka, taas oo muddo dheer ka faa'iideysatay sumcad weyn oo dadka dhexdeeda ah.
Si aad u sameyso malab adiga oo aan isticmaalin khamriga, waxaad u baahan doontaa qaybaha soo socda:
biyaha - 2 l;
malab - 300 g;
rajooyinka - 5 g;
qalalan khamiir - 1 qaado, la cadaadiyey - 25 g;
qorfe - dhadhanka;
dhir - dhadhanka.
Diyaarinta iyo xulashada malab
Honey waa ku habboon yahay wax kasta, laakiin cabitaanka ugu delicious waxaa laga helaa malab tayo sare leh ee noocyada iftiinka - lime ama acacia. Malabka Buckwheat sidoo kale waa ku habboon - ka dibna malab isu beddela midab qurxoon qurux badan, oo leh qadhaadh wacan.
Iska hubi noocyada kale ee malab, sida phacelia, bocorka, roodhada, miro iyo malab lørk.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad karkariso biyaha oo aad milixda malabta ku jirta, si tartiib ah isku walaaq qashinka. Habka loo kariyo, xumbadu waxay u muuqan doontaa dusha sare ee dareeraha - waa in laga saaraa si loo helo midab qurux badan.
Waa muhiim! In geedi socodka cunto karinta ma ka tagi kartaa sharoobada aan la joogin, sida malab si dhakhso ah gubi.
Ku dar dhadhan
Karkari isku dar ah, kareyso si joogto ah leh qaado, ilaa inta xumbada ay joojineyso (waxay qaadataa ilaa 5 daqiiqo wadarta). Ka dib markaa, ku dar shukumo (shubo), qanjaruufo oo furfurnaan ah iyo qanjaruufo qoraxda dhadhankaaga. Si tartiib ah iskugu diyaarso barafka kareysa, ka saar digsiga kuleylka iyo dabool dabool.
Dhammaan dhirta aad rabto inaad ku daro cabitaanka waxaa laga iibsan karaa dukaanka, iyo xabad joojinta way fududahay in laga helo farmashiyo kasta. Qof kasta oo xiiseynaya inuu wax ku kariyo guriga dhexdiisa, wuxuu ogyahay in cuntada cuntadu ay aad uga duwan tahay. Doorashada dhadhanka waa adiga.
U ogolow isku dhafka inuu ku buufiyo oo ku qaboojiyo qiyaastii 50 darajo. Ka dib markaa waxaad ku subagi kartaa khamiir ilaa digsiga.
Si arrintan loo sameeyo, qoyaan kalluunka qiyaastii 200 ml biyo diirran, oo ka baxsan saacad. Marka dusha sare aad aragto xumbo - khamiir "kasbaday", waana waqtigii lagu daro digsiga caadiga ah.
Waa muhiim! Ku shub khamiirka la badhaxo ee cabbitaanka malab la qaboojiyey. Haddii aad ku shubto biyo karkaraya - khamiirka ayaa dhiman doona, cabitaan macaanna ma shaqeyn doono.
Dheriga ku rid meesha aan heerkulka ka hooseeynin heerkulka qolka, ka hor inta halsano. Xaqiiqda ah in geeddi-socodka uu bilowday waxaa lagu keeni doonaa xumbo dusha sare ee dareeraha. Ka dib markaa, ku dhaji maskaxaha mustaqbalka ee tuubbo dhejis ah oo dabool leh qiiqa hawada. Waxaad isticmaali kartaa habka hore loo xaqiijiyay - ku rid qalabka elektarooniga ah qoorta silsiladda, waxay "calaamad u tahay" adiga oo ku saabsan halsano firfircoon ee dareeraha, iyo sidoo kale dhamaystirka.
Filitaanka iyo daadinta cabitaanka guriga
Nidaamka halsano badanaa wuxuu qaataa shan ilaa lix maalmood. Dhammaadkii (waxaad ku hubin kartaa ciyaarta: haddii kuleylka iftiinka soo baxo marka la keeno dareeraha - halsano ma ahan) waxaad u baahan tahay inaad ka daadiso cabitaanka, iyada oo loo maro dhowr lakab oo sharooto qaro leh oo midab qurux badan lehna ku shub dhalada ama dhalooyinka caaga ah. Raaxadan ayaa lagu kaydiyaa qaboojiyaha ama meel kale oo qabow.
Ma taqaanaa? Dhammaadkii waa la wada baabbi'iyey ma aha oo keliya qaabkeeda saafiga ah. Halkaas waxaa ku jira cocktails dhowr ah oo ka mid ah cabitaankan: ka badan cunto karis (oo lagu diyaariyey astaan ​​isku-dar ah oo la isku qurxiyo), kan kale ee cocktail - "Wedding" (waxaa ku jira malab iyo kvass), iyo xilliyada kuleylka ah ee Sowka "Kolomensky" (mead) + kefir).
Cuntada kale ee caanka ah
Honey waa la samayn karaa iyada oo la isticmaalayo khamiir kasta: Qallalan, diyaarsan ama nadiifiye. Laakiin waxay dhacdaa in aysan jirin khamiir qoys. Tani ma aha dhibaato.
U diyaargarowga guriga dhexdiisa iyada oo aan la isticmaalin qaybtaani waa mid macquul ah, cuntooyinka sahlan ayaa hoos ku taxan.
malab - 2 kg;
Hadda wax badan oo ku saabsan sida loo kariyo wax aan khamiir lahayn:
Isu diyaari sharoobada, malabinta malab karkaraya, karkari ilaa 15 daqiiqadood. Ha iloobin in xayawaanka laga saaro cabitaanka, waxay saameyn kartaa midabka iyo dhadhanka.
Marka isku dar ah ay ku heleen isku-mid ah labiska, ku qabow ilaa 50 darajo.
Gorma waa la qabadsiiyey oo ka buuxsamay sharoobada. Dheriga ku rid meel diiran maalmo yar.
2-3 maalmood ka dib, ku shub cabitaan mustaqbalka dhalada oo ku rid miiska. Waxaad isku dayi kartaa abuuritaanka ilaa 3 bilood.
Halkan waxaa ku qoran tusaale kale oo ah sida loo sameeyo macaanka, wax lagu qoro oo aan ku jirin khamiir. Waxaad u baahan doontaa:
malab - 80 g;
sabuun - 50 g
Aynu billaabno karinta ugu badan:
Ula qas malab biyo qabow ilaa inta suunka ah.
U kori sabiib leh sharoobada qabow, ku rid meel diiran ka hor halsano (2-3 maalmood).
Cadaadiska ku shub dhalada ama dhalada caaga ah. Ku rid qalabka mustaqbalka ee qaboojiyaha ama maqaasiinka 3-4 bilood. Kadib waad isku dayi kartaa.
Waa muhiim! Dad badan ayaa ku talinaya in aysan ku dhaqin jeeriga ama sabiibka ka hor inta aan la karin, ka hor inta aanad maydhin khamiirka dabiiciga ah, kaas oo ka masuul ah halsano, ka soo dushiisa.
Sida loo sameeyo soodhada soodhaha
Taageerada macmacaanka carbonated ah ayaa isticmaali kara talooyinka soo socda:
In dhalada nadiif ah, qalalan (dhalada ama caag) ku shub malab at heerka 1.5 tsp. halkii litir oo cabitaan ah. Tani waxay xaqiijin doontaa dib-u-dhiska, kaas oo buuxin doona meeraha leh dioxide kaarboon.
Ku buuxi weelka cabitaan, adigoo gaarin 5-6 cm ilaa gees. Hermetically xiro.
Mudo 7-10 maalmood ah, ku dhaji dhalooyinka meel mugdi ah heerkulka qolka dhexdiisa, si joogto ah u hubi iyo xakamaynta cadaadiska xad-dhaafka ah.
Ka hor intaan la isticmaalin, ku hayn khariidadda barafaysan ee qaboojiyaha muddo shan maalmood ah si ay "u bislaadaan".
Macmudidda iyo talooyin
Talooyinka soo socdaa waxay noqon doonaan kuwo aan macquul ahayn:
Mead waa la wada cuni karaa isla markiiba ka dib karinta, laakiin waxa fiican inaad hor istaagtid qiyaastii shan maalmood si aad u dhadhamiso dhadhanka.
Dhadhanka malabku wuxuu noqon karaa mid kala duwan oo kala duwan oo ah geedo kala duwan iyo dhir udgoon, dhir udgoon iyo midho. Dhammaan waxay ku xiran tahay dhadhankaaga iyo xajmigaaga.
Cabitaankani waa mid cajiib leh, ma aha oo kaliya marka la qaboojiyey, laakiin sidoo kale diiran.
Miraha iyo beeraha (qoryaha, lingonberries, tufaaxa, qaraha) waxaa loo tixgeliyaa cunto fudud, iyo liin la jarjaray ayaa ku habboon.
Sida aad u arki karto, sameynta gurigaaga waa mid sahlan oo degdeg ah. Waxa ugu muhiimsan waa in la raaco xeerarka fudud, ha ka baqin inaad tijaabiso, oo ugu dhakhsaha badan waxaad helaysaa cabitaan saafi ah oo aad u diyaarsan gacmahaaga.